Budata Genshin Impact maka Windows
Free Budata maka Windows (127.60 MB)
Budata Genshin Impact,
Genshin Impact bụ Anime edinam rpg egwuregwu hụrụ nanya PC na mobile gamers. Egwuregwu egwu egwu a na-eme nefu na-ebipụta ma bipụtara site na miHoYo na-egosipụta gburugburu ụwa mara mma nke mepere emepe na sistemụ ọgụ na-arụ ọrụ nke na-eji anwansi, mgbanwe omume, na ego maka ego maka ndị egwuregwu iji nweta ihe odide ọhụrụ, ngwa ọgụ, na ihe ndị ọzọ. Mmetụta Genshin abụghị Steam, enwere ike ibudata ya nefu na saịtị ndị nrụpụta.
Mmetụta Genshin Download PC
Egwuregwu ahụ nwere ike igwu naanị nịntanetị ma nwee oke egwuregwu ọtụtụ nke na-enye ohere ka ndị egwuregwu anọ egwu egwu. Mmetụta Genshin na-eme na ụwa efu nke Teyvat, ụlọ nke mba asaa dị iche iche, nke ọ bụla jikọtara ya na onye chiri ya na-achịkwa. Akụkọ a na - esote ejima a na - akpọ Wanderer, onye na - eme njem nọtụtụ ụwa mana onye Chukwu amaghi na Teyvat kewapụrụ ya netiti ụmụ ejima ya ndị ọzọ. Ha na enyi ohuru ha bu Paimon gafere Teyvat ka ha choo umunne ha ndi furu efu ma sonye nomume nke uwa na obodo.
Mmetụta Genshin bụ egwuregwu ụwa na-emeghe rpg nke na-eme ka onye ọkpụkpọ nwee ike ịchịkwa otu mkpụrụedemede anọ gbanwere na nnọkọ. Gbanwe netiti ihe odide nwere ike ịme ngwa ngwa na noge ọgụ iji nye onye ọkpụkpọ ọtụtụ njikọta dị iche iche nke nka na ọgụ. Enwere ike ime ka ike dị iche iche dị iche iche nụzọ dị iche iche, dịka ịzụlite ọkwa agwa na ịkwalite ngwa ọgụ ndị akụrụngwa ji. Na mgbakwunye na nyocha, onye ọkpụkpọ ahụ nwere ike ịnwale nsogbu dị iche iche maka ụgwọ ọrụ. Emecha nsogbu ndị a na - eme ka onye ọkpụkpọ ahụ bulie Adventure Ranking, nke na - emeghe nsogbu ọhụrụ ma bulie ọkwa ụwa. Ọkwa ụwa bụ otu etu ndị iro nọ nụwa siri sie ike na ụkọ ụgwọ ọrụ maka imeri ha.
Onye ọkpụkpọ ahụ nwere ike ijikwa ihe odide ahụ ma mee omume dịka ịgba ọsọ, ịrị ugwu, igwu mmiri na ịgba ọsọ na ume dị oke. Fọdụ ihe odide nwere ikike nke nwere ike ịgbanwe gburugburu ebe obibi, dị ka ifriizi mmiri iji mepụta ụzọ nwere ike inyere onye ọkpụkpọ ahụ aka ịgafe ala ahụ. Enwere ọtụtụ telivishọn ndị egwuregwu nwere ike ịkụ gburugburu ụwa, na akpụrụ akpụ a maara dị ka ihe oyiyi asaa nwere ike ịgwọ ma weghachite ihe odide ma nye uru dị ka ume egwuregwu na-abawanye. A na-enweta ihe dịka nri na ore site na ụwa mepere emepe, ebe ndị iro na igbe akụ bara ụba tụbara ụdị akụrụngwa ndị ọzọ enwere ike iji mee ka agwa ike dị elu. Foodsfọdụ nri na-eweghachi ahụike nke mkpụrụedemede ahụ, ebe ndị ọzọ na-ewusi stats dị iche iche ike.Enwere ike nụchaa ore ahụ wee mee ka ike ngwa agha dịkwuo ike ma ọ bụ mepụta ngwa ọgụ.
Omume ọ bụla nwere ikike ịlụ ọgụ abụọ pụrụ iche. Enwere ike iji nkà mmụta okike noge ọ bụla, belụsọ maka ebe oyi, ozugbo ejiri ya. Naka nke ọzọ, ntiwapụ sitere nokike nwere ụgwọ ike nke na-achọ onye ọrụ iji chịkọta ikike elementrị site na imeri ndị iro ma ọ bụ ịmepụta stats ntọala. Ihe odide a nwere ikike ijikwa otu ihe asaa dị iche iche (oyi, dendro, ọkụ, mmiri, anemo, electro, geo) nke kwekọrọ na ice, okike, ọkụ, mmiri, ikuku, ọkụ eletrik na ụwa notu notu. Ihe ndị a nwere ike ịmekọrịta nụzọ dị iche iche. Ọmụmaatụ; Onye iro na-akawanye mmiri mgbe mmiri wakporo ya, ma ọ bụ na-ajụ oyi mgbe agha oyi na-akụ ya.
Ọtụtụ mode dị nụdị ngalaba-op. Ruo ndị egwuregwu 4 gburugburu ụwa nwere ike igwu egwu. Enwere ike ịme egwuregwu egwuregwu site na izipu arịrịọ ijikọ na ọkpụkpọ ọzọ. Egwuregwu na-egosipụta obe-ikpo okwu na-egwu egwu, yabụ ndị egwuregwu na ikpo okwu ọ bụla nwere ike igwu egwu. Dị ka ndị egwuregwu zuru ezu, ọ bụghị naanị na ha na-enwe ọganihu na akụkọ ahụ, ha na-emeghekwa ihe odide ọhụrụ ma nwee ike ịnweta ihe odide na gacha mechanic.
Genshin Impact Ụdịdị
Nha faịlụ: 127.60 MB
Mmepụta: miHoYo Limited
Kacha ọhụrụ na: 10-07-2021
Enwere ike ịkọwa nlanarị Black dị ka egwuregwu na-egwu egwu nke a chịkọtara dị ka egwuregwu ịlanarị...
GRIME¸ bụ egwuregwu na-eme egwuregwu ngwa ngwa, enweghị mmejọ. Jiri ngwa ọgụ dị ndụ gbanwe ndị iro...
White Day: A Labyrinth Aha School bụ kọwaa dị ka a lanarị egwu genre egwu egwuregwu na-agụnye...
The Monster Inside nwere ike kọwara dị ka visual akwụkwọ tutuntu na-agwakọta a siri ike ikuku na a...